Faaladii dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay - Somalia Focus
Faaladii dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay
by admin | Saturday, Apr 4, 2015 | 529 views
Mogadishu, 04 April 2015 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Guddiga Axsaabta oo dar-dargelinaya qorshahooda, Dowladda oo Gargaar gaarsiisey Beeraleyda Gobolka Shabeelaha Dhexe, Soomaaliya iyo Shiinaha oo heshiis kala saxiixday, Waddo Laami ah oo laga hirgelinayo Kismaayo, Dib u heshiisiin ka socota Gobolka Hiiraan, Wasaaradda Qorsheynta iyo Hay’ada Istaatistikada ee Sweden oo heshiis kala saxiixday, 105 arday oo ka qalanjibisey Jaamicada PSU, Olole Nadaafadeed oo ka socda Muqdisho, Waaxda Wajeer ee degmada Kaaraan oo xariga laga jaray, Gargaar raashin ah oo la gaarsiiyey Beledweyn, iyo Dowladda oo dhiirigelineysa waxsoosaarka Kheyraadka Badda.
Guddiga Axsaabta oo dar-dargelinaya qorshahooda
Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa 1dii April kormeeray kulan howleed magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda uga soconaya Guddiga Axsaabta ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Kulan howleedkan oo Guddiga Axsaabta ee Baarlamaanka ay ku dhameystirayaan diyaarinta sharciga axsaabta dalka oo ka mid ah sharuucda ugu muhiimsan ee laga dhowrayo Baarlamaanka Soomaaliya iney hirgeliyaan si ay u fududaato qabsoomidda doorasho xor ah sanadka 2016ka iyo dhaqangelinta hiigsiga 2016. Hay’adda Oslo Center oo khibrad fog u leh howlahan ayaa fududeysey in baarlamaanku uu dhameystiro qorsho howleedkiisa. Gudoomiyaha Guddiga Axsaabta ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Prof C/risaaq Cusmaan Jurile ayaa faah faahin ka bixiyey halka ay u marayaan shaqooyinka laga dhowrayo waxaana uu Prof Jurile tilmaamay in hada ay howshu ku dhowdahay gebo gebo islamarkaana uu rajeynayo in Kalfadhiga 6aad bilowgiisa sharcigan la horkeeno Baarlamaanka. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa uga mahad celiyey guddiga dadaalkooda iyo dowladda Norway oo Soomaaliya ka taageereysa arrimaha hirgelinta xisbiyada si gaar ahna waxa uu ugu mahad celiyey hay’adda Oslo Center oo fududeyneysa kulan howleedkan. Guddoomiyaha ayaa guddiga kula dar daarmay iney ku dadaalaan hirgelinta sharcigan si muwaadin walba oo Soomaaliyeed uu u helo xaqiisa siyaasadda.
Dowladda oo Gargaar gaarsiisey Beeraleyda Gobolka Shabeelaha Dhexe
Wasiirka Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Drs Xaawa Maxamed Xasan oo uu wehliyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha gudaha Mudane Cali Sheekh Maxamed Xaaji Cali iyo mas’uuliyiin ka socotay dowladda Qatar ayaa 1dii April 2015 booqday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe. Wafdigan ayaa waxa ay kormeereen xarumaha caafimaadka ee magaalada Jowhar, halkaasi oo ay ugu kuurgalayeen xaaladda caafimaad ee magaalada, iyagoo dad beeraleey ah u qeybiyay abuur, isla markaana guddoonsiiyay lacago ay beerahooda ku tabcan karaan. Wasiirka Caafimaadka Xaawa Maxamed Xasan iyo wafdiga la socday waxa ay dhagax dhigeen Iskuulka Hoose Dhexe iyo Sare ee Sheekh Xuseen Cadde ee magaalada Jowhar, halkaasi oo lagu soo kordhinayo dhismo cusub. Guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Cabdullaahi Xuseen “Cali Guudlawe” ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in wafdi heer sare ay soo booqdaan degmada, taasi oo uu muujineysa amniga ka jirta magaalada Jowhar. Wasiir Xaawa ayaa sheegtay in ujeeddada booqashadeeda ay tahay sidii ay ugu kuurgeli lahayd xaaladda caafimaad ee ka jirta gobolka, waxaana ay xustay inay xoogga saareyso sidii loo heli lahaa adeegyo caafimaad oo dhameystiran.
Soomaaliya iyo Shiinaha oo heshiis kala saxiixday
Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa heshiis la xiriira dhanka iskaashiga ay 1dii April 2015 ku kala saxiixday Muqdisho. Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya mudane Cabdi salaam Hadliye Cumar iyo Danjiraha Dowladda Shiinaha u fadhiya dalka Soomaaliya Danjire Wei Hongtian ayaa heshiiskan kala saxiixday. Danjiraha Shiinaha ayaa sheegay in heshiiskani uu muujinayo astaan cusub oo xoojineysa xiriirka soo jireenka ah eee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Shiinaha isagoo balanqaaday in Shiinaha ay diyaar u tahay in ay xoojiso xiriirkaas Soomaaliyana ay garab istaagto. Danjiraha ayaa waxaa uu ku wareejiyay Wasiirka Arimaha Dibadda Soomaaliya lacag gaareysa 80 milyan oo lacagta dalka China ah isla markaana u dhiganta 13 milyan oo doolarka mareykanka ah taas oo Shiinaha ay ugu talo gashay in ay uga qayb qaadato dib u dhiska dalka Soomaaliya. Wasiirka Arimaha Dibadda Cabdisalam Hadliye Cumar ayaa lacagtaas ka gudoomay danjiraha waxaana uu uga mahadnaqay Dowladda Shiinaha sida ay u caawineyso dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay mar walba diyaar ugu tahay in xiriirka labada dalka uu sii adkaado.
Waddo Laami ah oo laga hirgelinayo Kismaayo
Madaxweynaha Jubbaland Mudane Sheekh Axmed Maxamed islaan (Axmed Madoobe) ayaa 1dii April 2015 dhagax dhigey waddo laami ah oo kutaal Magaalada kismaayo oo maamulku sheegay in lagu samayn doono dayactir. Dayactirka wadadaan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya maamulka Jubbaland, shirkado ganacsi iyo hay’ado ka howlgala Kismaayo. Wadada la dayactirayo ayaa qiyaas ahaan gaareysa 17 km oo ka Billaabanaysa jaamacadda magaalada kismaayo oo kutaala dhanka waqooyi ee magaalada kismaayo illaa garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo oo u jira wadada la dayactirayo magaalada 12km.
Dib u heshiisiin ka socota Gobolka Hiiraan
Shirka dib-u-heshiisiinta beelaha gobolka Hiiraan ayaa maalintii ka qabsoomay Beledweyn, ayadoo ergo ka socota beelaha dega gobolka ay ka qeybgaleen shirkan dib u heshiisiinta. Odayaal, Waxgarad iyo siyaasiyiin ayaa isugu tagay magaalada Beledweyne si ay uga shiraan sidii loo heshiisiin lahaa beelaha dega gobolka, tallaabadan ayaa loogu gogol xaarayaa shir guud oo maamul goboleed loogu sameynayo gobolka. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ah waday dadaalo lagu dhaqangelinayo nidaamka Federaalka oo asal u ah in shacabka deegaanka ay heshiiyaan si ay aayahooda uga tashadaan oo ay u helaan midnimo suurto gelisa in maamulada la dhisayo ay u noqdaan kuwo shacabka deegaanka ay kalsooni ku qabaan, isla markaasna dowladda Federaalka u sahleysa inay door hoggaamineed qaadato oo lagu dhaqangelinaya nidaamka Federaalka.
Wasaaradda Qorsheynta iyo Hay’ada Istaatistikada ee Sweden oo heshiis kala saxiixday
Wasiirka Wasaarada Qorsheynta iyo Iskaashiga caalamiga ah iyo madaxda Hay’ada istaatiskada ee Sweden ayaa si wadajir ah 31kii Maarso 2015 u kala sixiixday hishiis mudo afar sano ah kaas oo Hay’adu ay Dowlada Soomaaliya ka caawini doonto go’aanada cilmga ku qotomo, sida tirakoobka dadka, iyo ilaha dhaqaalaha, waxaana hishiiskan ku baxaya malaayiin lacag ah. Mashruucan ayaa ah mid muhiim u ah hiigsiga 2016 bacdamaa ay sahleyso in la xaqiijiyo tiro-koob sax ah, iyada oo hishiiskan uu sidoo kale qeyb ka yahay dib u dhiska xarunta istaatiskada ee Wasaaradda Qorsheynta. Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah mudane C/raxmaan Yuusuf Ceynta ayaa sheegay in hishiiskan uu yahay mid dib loo soo nooleeyey dhowr iyo labaatan sano ka-dib maaddaama dowladda Sweden ay horay dowladihii dalka soo maray wixii ka horeeyey 1991dii ay ka caawini jirtay arrimaha istaatiskada, waxa uuna rajo wanaagsan ka muujiyey in dowladda iyo maamullada dalka ka jira ay ka faa’iideysan doonaan hirgalinta xaruntan. Wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah mudane C/raxmaan Ceynte waxa uu la kulmay Wasiirka Horumarinta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Sweden Isabella Lövin, ayaa ku tilmaantay heshiiskan in uu yahay mid sii xoojinayo xiriirka labada dal. Wasiirka Qorsheynta ayaa sidoo kale kulan ballaaran la qaatay hay’adda deeqaha iyo horumarinta caalamiga ah u qaabilsan sweden ee SIDA iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Sweden.
105 arday oo ka qalanjibisey Jaamicada PSU
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa 30kii Maarso uu ka qayb-galay xaflad arday ka qalin-jebisay Jaamacada PSU, waxaana ay ka koobnaayen ardaydaasi shan-qeybood oo tiradoodu dhantahay 105-arday, 76-wiil iyo 29-gabdhood. Wasiirka Waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame, Wasiiro ka tirsan xukuumada maamulka Puntland, Maamulka gobolka Nugaal, maamulka Jaamacadda PSU, Waxgarad, waalidiin, aqoonyahano, mas’uuliyiin kala duwan iyo ardeyda Jaamacadda ayaa si farxadi ku dheehantahay uga qeyb-galay munaasibadda. Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray dhammaan ardeyda ka qalin-jebisay Jaamacadda PSU oo uu sheegay inuu kala qayb qaadanayo farxadooda iyo guusha ay gaareen, waxaana uu ugu baaqay inay sii wadaan dedaalka waxbarsho ee ay wadaan si ay dalka iyo dadkaba ugaga faa’iideeyaan waxa ay barteen. Ugu dambeyn Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa shahaadooyin, shahaado sharafyo iyo abaalmarino kala duwan gudoonsiiyey dhammaan ardayda qalinjabisay, dhinaca kale maamulka jaamacadda iyo ardayda jaamacada ayaa waxaa ay bilad sharaf gudoonsiiyeen Madaxweynaha taas oo uu ku mutaystay dedaalka iyo horumarka balaaran ee uu Puntland gaarsiiyey mudadii uu hogaanka dalka hayey.
Olole Nadaafadeed oo ka socda Muqdisho
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa Muqdisho ka wada olole nadaafadeed si bilicda caasimadda Dalka kor loogu qaado. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa in mddo ahba ku howlanaa sidii uu dib ugu soo celin lahaa bilicdii ay caasimaddu lahayd, tanoo ah mid la joogteyn doono. Maamulka Gobolka ayaa xilliyada habeenkii wada howlaha nadaafada waddooyinka waa weyn ee caasimadda, sida tan Maka Al-mukarama, waana tallaabo aad u muhiimsan in shaqaalaha Nadaafadda dowladda Hoose ee Xamar ay markale u istaagaan in habeen iyo maalin la nadiifiyo bilicda Muqdisho. Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay kaalin muhiim ah ka qaataan sidii loo dhowri lahaa nadaafadda guud gaar ahaan kuwa goobaha ganacsiga oo dadku isagu yimaadaan, waxeyna ka codsadeen shacabka inaan waddooyinka lagu daadinin qashinka. Sidoo kale maamulka Gobolka ayaa wada qorshe ah sidii dib loo furi lahaa dhuumaha ay biyaha maraan, maadaama xilli roobaad la guda geli rabo, si waddooyinka Muqdisho aysan u noqon meelo ay biyo fadhiistaan.
Waaxda Wajeer ee degmada Kaaraan oo xariga laga jaray
Munaasab xariga looga jarayay Waaxda Wajeer ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay Waaxdaas 29kii Maarso 2015, oo uu soo qabanqaabiyay maamulka degmada Kaaraan waxaana ka soo qeyb galay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, dadweyne, Haweenka degmada. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Yalaxow ayaa sheegay dadka ku dhaqan degmada kaaraan in ay diyaar u yihiin mar walba ka shaqeynta horumarka degmadooda isagoona tilmaamay dib u howlgelinta waaxda Wajeer ay qeyb weyn ka qaadan doonto horumarka degmada. Gudoomiye ku xigeenka Arrimaha Siyaasada iyo Amniga mamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye oo xariga ka jaray waaxda Wajeer ee degmada Kaaraan ayaa ku amaanay maamulka degmada iyo shacabka ku nool degmada sida wanaagsan ay ugu wada shaqeeyaan horumarka degmada isagoona tilmaamay in laga bilaabo xilligan ay furantahay Waaxda Wajeer ee degmada kaaraan ee goboka Banaadir.
Gargaar raashin ah oo la gaarsiiyey Beledweyn
Dowladda Federaalka oo in muddo ahba waday dadaalka sidii dadka loo gaarsiin lahaa gar-gaar bani’aadanimo ayaa 29kii Maarso 2015 ayaa Dad gaaraya kun iyo shan boqol oo qoys oo danyar ah raashin gar gaar ah loogu qaybiyay xaafadda Buundo-weyn ee Degmada Beledweyn ee Gobolka Hiiraan, iyadoo dadkaasi ay si niyad sami ka muuqato ay uga mahad celiyeen deeqda la soo gaarsiiyay. Deeqdan oo isugu jrtay bur, bariis, sonkor iyo saliid ee loo qeybiyay qoysas danyar ah ayaa waxa ay hay’ada Relief Islamic soo gaarsiisay hay’ad laga leeyahay dalka Boqortooyada Sacuudiga, iyadoo dadkii loo qeybiyay ay ka mahadceliyeen gar gaarka la soo gaarsiiyay. Cismaan Axmed Macow oo ka socda hay’adda Relief Islamic ayaa sheegay in kun iyo shan boqol oo qoys ay raashinka gar-gaarka ah u qeybiyeen, isagoo Maamulka Gobolka Hiiraan, gaar ahaan ciidamada amniga uga mahadceliyay suurtagalnimada qeybinta kaalmadaasi.
Dowladda oo dhiirigelineysa waxsoosaarka Kheyraadka Badda
Wasiirka Kalluumaysiga iyo Kheyraadka badda Xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar “Ceymooy” ayaa sheegay in Wasaaradda ay waddo qorshe lagu Hormarinayo wax soosaarka kalluunka kujira badda iyo Horumarinta tayada xirfadlayaasha ku shaqyasta wax soo saarka badda. Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ayaa in muddo ahba kala shaqeyneysay Hay’ada FAO sidii loo horumarin lahaa tayada shaqaalaha Wasaaradda iyo keenista qalab tayo leh oo loo adeegsado wax soosaarka kalluunka iyo kheyraadka badda kujira. Dowladda Federaalka ayaa in muddo ahba waday dadaal shacabka loogu horseedayo sidii ay uga faa’iideysan lahaayeen kheyraadka dalka oo ay isagu tashan lahaayeen. Wasiirka kalluumaysiga iyo Kheyraadka badda mudane Maxamed Cumar “Ceymooy” ayaa dhammaan Xirfadd layaasha dhinaca kalluunka ku dhiiri geliyay in ay sii wadaan Shaqada ay bulshada u hayaan si looga faa iidaysto wax soosaarka kalluunka iyo kheyraadka kale ee badda kujira, Dhallinyarada Soomaliyeed ee shaqa la’aanta hayso iyo kuwa la qalday ayuu ugu baaqay in ay ka faa iidaystaan barashada wax soosaarka kheyraadka dalkooda.
Booliska Uganda oo heegan kujira iyo Digniin la soo saaray